FBC - Magaalota Itiyoophiyaa tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala’aa jijjiirama qilleensaaf mijataa ta’e isaan barbaachisa
Magaalota Itiyoophiyaa tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala’aa jijjiirama qilleensaaf mijataa ta’e isaan barbaachisa
Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (FBC) Magaalota hunda keessatti tajaajilli bishaan dhugaatii fi dhangala’aa waaraa jijjiirama qilleensaaf mijataa ta’e hojiirra ooluu akka qabu Ministeerri Bishaanii, Jallisii fi Elektirikaa beeksise.
Fooramiin Tajaajila Bishaanii fi Dhangala’aa Biyyaalessaa 11ffaa Magaalaa Goondaritti kaleessaa jalqabee geggeffamaa jira.
Fooramichi itti-fayyadama bishaanii fi dhabamsiisa dhangala’aa magaalota biyyattii keessatti argamanii irratti rakkoolee mul’atan furuuf kan karoorfatedha jedhameera.
Ministirri Bishaanii Jallisii fi Elektirikaa Doktar Injinar Silashii Baqqalaa baniinsa waltajjichaa irratti akka himanitti guddina gama maraa biyya keenyaaf dhiheessiin bishaan dhugaatii qulqulluu murteessaadha.
Keessumaa ammoo bara Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii Lammaffaatti baadiyyaatti guyyaa tokkotti nama tokkoof bishaan liitira 25 waliin-ga’uu dhibbantaa 85itti guddisuuf hojjatamaa kan jiru yoo ta’u, magaalaaattis dhibbantaa 75niin ga’uuf hojjatamaa akka jiru ibsameera.
‘Ministeerichi’ dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa qaqqabsiisaa jiruun wal-qabatee naannoleen kana dura argama bishaanii turan gogaa akka jiran eeranii, naannoleen lafa keessaa fi lafa irraa kuusaan bishaanii olaanaa irraa argamaa turan hir’ataa akka jiran dabalanii himaniiru.
Kanaanis magaalonni biyyattii hundi sirna dhabamsiisa dhangala’aa haala qilleensaaf mijataa ta’e qabaachuu qabu jedhameera.
Baay’inni magaalotaa dabalaa wayita jiru kanatti sirni dhabamsiisa dhangala’aa hammayyaa ta’uu hafuunsaa akka rakkootti maricha irratti ka’eera.
Bishaan haala qulqullummaa qabuun ga’umsaan waliin ga’uuf addaan-ciccituun humna elektirikaa xiyyeeffannoon itti-kennamee hojjatamuu akka qabu eerameera.
Meeshaalee hojii bishaanii saffisiisuu danda’an gama dhiheessuun keessumaa ammoo biyya alaadhaa kan galan qulqullummaa isaanii kan hin-eeggamnne ta’uun isaanii yaachisaa akka ta’e qaamoleen maricha irratti hirmaatan akka dadhabbiitti kaasuunsaanii himameera.
Rakkoolee kanneen furuun tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala’aa caalaa waliin ga’uuf Waajjirri ministeerichaa hojimaata isaa jijjiiraa jira jedhameera.
Keessumaa tajaajila isaa hammayyeessuuf humna ofii isaa danda’e hundeessuuf hojjataa jira jedhameera.
Sirna dhabamsiisa dhangala’aa sadarkaa gadi aanaa irra jiru fooyyessuuf ammoo Doolaara Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 60 Baankii Addunyaa irraa argameen Magaalota 23 biyyaattii keessatti argamanii ramadamee sochiintti akka jiramu eerameera.
Kana keessaa magaalota dhabamsiisi dhangala’aa olaanaa irratti mul’ata jedhaman keessaa Finfinneen Doolaarri Ameerikaa miliyoonni 200 ol ramadameefii hojileen ciminaan hojjatamaa akka jiran ibsameera.
Marii kanaarratti hoji-geggeessitoonni bishaanii fi dhangala’aa naannolee gara-garaa irraa wal-ga’an, ‘Ministeerri’ Eegumsa Fayyaa, Korporeeshiniin Elektirikii Itiyoophiyaa akkasumas dhaabbileen mootummaa fi miti-mootummaa irratti hirmaataniiru.
Marichi dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa qaqqabsiisaa jiru ittisuuf imaammati biyyattii maal jedha kan jedhuun akka itti-fufu eerameera. Haayiluu Maammootu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Itiyoophiyaa fi Keeniyaan hidhata dinagdee naannichaa keessatti gahee akka qabaatanitti hojjataa jiru	Biyyattiin bu’aa olaanaa ‘invastimantii’ hawwachuun galmeessisteef sadarkaa idil-addunyaatti badhaafamte »